Fahatakarana ny sehatra | Martech Zone
Fahatakarana ny sehatra
Talata, Febroary 27, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Hokey kely ny feony rehefa mamaritra ny Internet ho Webostera na bilaogera ho toy ny Blogosphere ny olona. Na izany aza, misy tokoa ireo sosona izay miharihary mazava. Rehefa mitombo ny fahitan'ny mpijery tranokalanao dia manomboka mitsidika matetika kokoa ireo mpitsidika ary manintona dolara bebe kokoa.
Sarotra anefa ny mamaky ny akoroky ny sosona tsirairay avy. Manangana tranokala na bilaogy ianao ary matetika dia tsy misy mpitsidika na manintona raha tsy nasaina in. Io fanasana io dia avy amin'ny alàlan'ny tranonkala hafa, mahalana amin'ny fomba hafa. Ny orinasan-tserasera dia miavaka amin'izany. Ny orinasan-tserasera dia efa nanana fizarana faobe ka afaka nanararaotra izany fizarana izany hananganana fototra amin'ny tranonkala.
Mampalahelo fa miadana ny mandray ny haino aman-jery nentim-paharazana, na izany aza, ka tsy maintsy nandoa vola be izy ireo mba hamerenany ny sasany ny fotoana very. Ireo olona izay nanam-bintana niditra tamin'ny tranokala aloha (ny sasany manana sy tsy manana talenta na vokatra lehibe) dia mbola mioty ny tombony ihany. Izy ireo no mpisava lalana izay nitaky ny anjarany tamin'ilay tany izay sarobidy ankehitriny.
Ireo manam-pahaizana momba ny fanatsarana motera fikarohana, bilaogera vaovao lisitra vaovao, ary orinasam-barotra e-varotra mahomby dia mahatakatra fa ny fomba fananganana orinasan-tserasera mahomby dia ny miala tsimoramora isaky ny sosona mba hahazoana ny manaraka. Ny ankamaroan'ny lesona nianarana tamin'ny 'bubble' voalohany dia ny lesoka nataon'ny tanora rockstars maro, na dia tsy nisy farany aza ireo antontam-bola niavosa teo am-piandohana. Tonga teo amin'ny tabilao aloha izy ireo, saingy tsy afaka nitazona azy ireo ho tonga.
Ny Web 2.0 dia mety ho fitambaran'ny teknolojia sy ny fitaomana ara-tsosialy, saingy ny fampiasam-bola amin'ny renivohitra sy ny famonoana azy hatrany amin'ny soson-tany. Mety ho afaka hamaky sosona etsy sy eroa ianao amin'ny fandoavana izany, saingy mila maharitra ny lazanao vaovao ianao ary manohy manindry ny sosona manaraka. Raha bilaogera vaovao ianao na olondehibe ecommerce efa za-draharaha dia tsy miova izany. Ny “Web Cemetery” dia feno dot coms izay tsy nahafantatra fa marathon ity fa tsy sprint.
Ny fifantohana sy ny vola dia tsy zaraina mitovy. Ny fifantohana amin'ny tranonkala dia mitovy amin'ny zazalahy 10 taona feno mofomamy sy Mountain Dew amin'ny fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Ny vola dia lasa matevina tsy manam-petra rehefa manakaiky ny afovoan'ny faribolana ianao. Talohan'ny tranonkala, tsy nanana fidirana tamin'io vola io izahay, tsy fantatray akory hoe taiza izy… nilaina ny fitaomana sy fifandraisana nifandimby. Nahita ny làlana marina sy ny olona marina izany. Amin'ny Internet, tsy mitovy izany.
Miandry ny manaraka ny Webostera zavatra lehibe. Misy fotodrafitrasa iray manontolo hiandry sy hahita ny manaraka zavatra lehibe. Ny milina fikarohana sy ny haitao toa Digg no malaza indrindra. Google dia manangana rindranasa isaky ny mihodina ianao mba hitazonana ny sosona misy eo aminy sy ny fifaninanana misy azy ireo. Tsy manana loharanom-pahalalana mifaninana amin'i Google izaho sy ianao. Na izany aza, ny orinasa tsirairay dia tsy tompon'ny tranokala ary tsy afaka mifaninana amin'ny vokatra tsara, hevitra tsara ary ireo olona miasa mafy hitondra azy ireo any an-tsena.
Ny teny tsirairay ao amin'ny bilaoginao dia mivoaka manaraka ny sosona manaraka. Ny fanovana endrika tsirairay izay mahasarika mpitsidika hafa dia manampy amin'ny sosona iray. Ny fanovana tsirairay hanatsarana ny bilaoginao fahitana chips lavitra. Isaky ny mahazo trackback ianao dia miala aminy ny chips. Isaky ny maneho hevitra amin'ny bilaogy hafa ianao, dia miala aminy izany. Manomboka amin'ny tontolon'ny Internet, hatrany amin'ny tontolon'ny bilaogy, hatrany amin'ny fahazoana mpamaky, na amin'ny fanaovana ny A-List an'ireo bilaogera aza - dia lavitra ny dia. Saingy afaka manao izany ny tsirairay amintsika.
Ny zavatra tsara hafa amin'ny sehatra dia ny fitomboan'ny gravitational rehefa manakaiky ny foibe ianao. Indray andro dia nomena isa 500,000 ny bilaoginao ary enim-bolana taty aoriana dia lasa 5,000. Ny ankamaroan'ny olona dia ho lany etona, ho lany hevitra, ho lany vola, na hanary ny hirany fotsiny amin'ny tabilao.
Ny sokatra sy ny bitro… ny sokatra no manana azy! Tapaho hatrany!
dnScoop milaza fa dnScoop.com tsy dia misy dikany firy
Hamafisin'ny tahotra: hosoka amin'ny mombamomba anao sy ny Internet
28 Feb 2007 tamin'ny 1:19 maraina
Angamba miaraka amin'ny nenina kely aho dia mahita bilaogy SEO/marketing/business an-tserasera (vondrona ankapobeny) manjaka amin'ny tontolon'ny bilaogy. Na dia ampahany kely amin'ny votoatin'ny votoaty novokarin'ny mpampiasa aza ny bilaogy fampiroboroboana dia aseho tsy mifandanja amin'ny fikarohana sosialy toy ny fikarohana bilaogy, matsiro & technorati.
Ny SEO dia manjaka amin'ny milina fikarohana, ka izany no antony iantsoana azy ireo optimizers motera fikarohana. Tsy voatery hilaza aho hoe zavatra ratsy izany, fa mahafinaritra ny manana fifandanjana.
28 Feb 2007 tamin'ny 4:38 maraina
Sombiny tena manentana. Tiako ny fomba fijerinao ny sosona sy ny asa ataonay izay manampy amin'ny "chipping" amin'ireo sosona ireo.
Febroary 28, 2007 amin'ny 2:32 PM
Febroary 28, 2007 amin'ny 3:30 PM